Wax ka Barta Masiix oo ah Hoggaamiyaha
ILAAHAY wuu inoo sii sheegay inuu Masiix dooran doono uuna ka dhigi doono Hoggaamiyaha dadka caalamkoo dhan. Ilaahay wuxuu ogyahay inaan Hoggaamiye u baahan nahay, wuxuuna doortay kii ugu wanaagsanaa. Hoggaamiye caynkee ah buu Masiixu xaqiijiyay inuu yahay? Jeneraal awood leh? Siyaasi saanac badan? Caqli garaad xigmad leh? Qorniinka Quduuska ah waxaa ku taalla inuu Masiixu yahay nebi gooni ah, kaasu waa Ciise Masiix.—Matayos 23:10.
Ilaahay wuxuu xaqiiqiyay inuu Ciise dhasho isagoo qumman oo quduus ah. Oo Ciise wuu iska adkeeyay Shayddaanka dulleysigiisa. Ciise si kaamil ah buu shuqulladiisii iyo hadalladiisii oo dhan ku bandhigay awoodda, caddaaladda, xigmadda iyo jacaylka Ilaahay. Bal aan fiirinno waxaynu ka baran karno masaalka Ciise.
Si deeqsinimo ah buu Ciise dadka u caawin jiray
Wuxuu isticmaali jiray awoodduu Ilaahay siiyay siduu dadka u caawiyo. Si run ah buu Ciise dadka u daneyn jiray oo si deeqsi ah buu xooggiisa u isticmaali jiray siduu u siiyo waxay u baahan yihiin. “Dadka badan ayaan u naxariisanayaa, waayo . . . waxay cunaanna ma haystaan.” (Markos 8:2) Markaas buu Ciise si yaab leh cunto u siiyay dadkii badnaa ee yimid inay maqlaan waxbariddiisa.
Ciise meelo badan buu aaday, isagoo wax baraya oo “bukaan oo dhan iyo cudur oo dhan bogsiinaya dadka dhexdiisa.” (Matayos 4:23) Sidaas daraaddeed waa la garan karaa sababtay dad fara badan u soo raaceen. Oo “dadkii badnaa oo dhan waxay doonayeen inay taabtaan isaga, waayo, xoog baa ka soo baxay oo wada bogsiiyey.” (Luukos 6:19) Run ahaan Ciise u muu iman, “in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo.” (Matayos 20:28) Immisa hoggaamiyaal baa naftooda u isticmaalay inay dadkooda u adeegaan sida Ciise oo kale?
Ciise jacayl buu carruurta u qabay
Wuxuu si kaamil ah u bandhigay caddaaladda Ilaahay. Ciise wuxuu ku socon jiray amarrada Ilaahay iyo qaynuunnadiisa oo dhan. Siduu Qoraalku inoo sii sheegay, Ciise wuxuu u dhaqmay sida erayadan sheegeen: “Ilaahayow, waxaan jeclahay inaan sameeyo doonistaada, haah, oo sharcigaagu wuxuu ku dhex jiraa qalbigayga.” (Sabuurradii 40:8) Ciise si sharaf, maamuus iyo caddaalad leh buu miskiinka iyo taajirka, nin iyo naagba, carruurta iyo waayeelka u ixtiraami jiray siduu Ilaahay dadkaas u ixtiraamo. Mar bay xertiisu canaanteen waalidiintii ilmahooda yaryar u keenay Ciise, laakiinse wuxuu ku yiri: “Ilmaha yaryar daaya, ha ii yimaadeene, hana diidina, waayo, kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada Ilaah.”—Markos 10:14.
Wuxuu muujiyay xigmadda Ilaahay. Ciise binuʼaadanka si fiican buu u yaqaannay. “Isaga qudhiisu waa yiqiin waxa dadka ku jira.” (Yooxanaa 2:25) Markay cadowyadii Ciise dad soo direen in la soo qabto, kuwaas baa dib ugu jawaabay: “Ninna weligiis uma hadlin sida ninkaasi u hadlay.” Xaggee buu Ciise xigmaddiisa ka helay? Wuxuu yiri: “Waxbariddaydu tayda ma aha, laakiin waxaa leh kan i soo diray.”—Yooxanaa 7:16, 46.
Ciise si naxariis leh buu kuwa jirran u bogsiin jiray
Wuxuu ina tusay jacaylka Ilaahay. Ciise dadka wuu u naxariis badnaa. Nin “baras miidhan ah” baa baryay: “Sayidow, haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa.” Kolkaasuu Ciise u naxariistay “oo intuu gacantiisa soo taagay, ayuu taabtay, oo ku yidhi, waan doonayaa ee daahirsanow. Oo kolkiiba baraskii waa ka baxay.” (Luukos 5:12, 13; Markos 1:41, 42) Si xaqiiq ah buu Ciise jeclaaday inuu ninkaas dhibaatadiisa ka bixiyo.
Ciise adiga miyuu ku daneeyaa? Ciise baa jawaabay: “Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin nasin doonaa. Harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta; waayo, waan qaboobahay, qalbigayguna waa hooseeyaa, oo naftiinna nasashaad u heli doontaan.”—Matayos 11:28, 29.
Ciise waa Hoggaamiyaha ugu wanaagsan oo aan weligeen heli karno. Sidaas daraaddeed wuxuu inoogu talinayaa si degdeg ah: Aniga “iga barta.” Maad aqbali doontaa yeeristan wanaagsan? Haddii ad aqbashid nolol fiican baad heli doontaa.
Ilaahay muxuu Ciise ka dhigay?
Tayooyinkee buu Ciise bandhigay? Midkee baad u sii jeceshahay?
Yeeristee buu Ciise inoo fidinayaa?
Wadaag Wadaag Wax ka Barta Masiix oo ah Hoggaamiyaha